Marabtaa inaad tijaabiso HBO hadda bilaash? hadda iibsashada Chromecast waxaan haysan doonaa 2 bilood oo bilaash ah | Wararka IPhone
Marabtaa inaad tijaabiso HBO hadda bilaash? hadda iibsashada Chromecast waxaan haysan doonaa 2 bilood oo bilaash ah
Wax badan baa laga sheegay arrintaas Apple wuxuu go'aansaday inuu soo bandhigo adeegga fiidiyowga ee qulqulaya qaabka ugu nadiifsan ee Netflix, moodeel ganacsi oo sanado badan ka dib burcad badeedu guuleysatay, waxay umuuqataa inay ku shaqeyneyso qaab in yar laga filayo kadib soo bandhigida fikradda ah oo dhan waa lacag la'aan. Waana taa kaliya maahan Netflix isaga u soo shaqeeyay, Mareykanka gudahiisa waxaa ka jiray adeegyo badan oo muddo dheer shaqeynayay, iyo Isbaanishka, midka kale ee weyn wuxuu ahaa HBO Hadda, ama HBO Spain, dhowr bilood..
Sidee loo daawan karaa HBO waxyaabaha guriga yaal Waxaan marwalba booqan karnaa webka, ama codsiyada kala duwan ee aan u heyno aaladaha mobilada, in kastoo shaki la'aan waxa ugu fiican ay tahay inaan ku raaxeysan karno HBO waxyaabaha ku jira Apple TV. Apple TV-ga aan xasuusano wuxuu ahaa aaladdii ugu horeysay ee yeelatay barnaamijka HBO, barnaamijka waxaa xaqiiqdii lagu soo bandhigay isla halbawlaha lagu soo bandhigay Apple TV, laakiin ka reebiddu weligeed ma sii jiri doonto ... Haa, waan awoodnaa sidoo kale ku raaxee HBO iyada oo loo marayo Chromecast, iyo tan kor ku xusan hadda waxay na siinayaan 2 bilood bilaash ah oo HBO ah ...
Si aan u galno dalacsiintan waa inaan ku qasbanaan kala soo bax barnaamijka Google Home halkaas oo aan ka heli doonno dhammaan tilmaamaha dallacaadda: asal ahaan waxay na siin doonaan lambar xayeysiis ah (dallacaad ilaa May 30), taas oo waa inaan galnaa bogga HBO Spain markii la samaynayo xisaab. Markaa waan furi karnaa koontadayada si aysan noo sii wadin inay naga qaadaan, ama haddii ay nagu qanciyaan inaan sii wadno bixinta.
Marka u diyaar garow inaad ku raaxeysato taxanaha sida Game of Thrones, Dambi-baare run ah, Jinsi iyo Magaalada, Sopranos-ka, ama loo bogay Westworld, kuwo kale oo badan dabcan. Haddii aad rabto qalab raqiis ah si aad uga daawato waxyaabaha noocan ah telefishankaaga, haka laba labeyn inaad hesho Chromecast, oo ah qalab raqiis ah oo ku habboon waxyaabaha noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Marabtaa inaad tijaabiso HBO hadda bilaash? hadda iibsashada Chromecast waxaan haysan doonaa 2 bilood oo bilaash ah
Xaqiiqdii waxay leedahay xoogaa khiyaano ah, maxaa yeelay bisha ugu horreysa waa u lacag la'aan qof walba… Marka farsamo ahaan kaliya waxay iska bixiyaan bil dheeraad ah…
Ku jawaab albertoglezc
WeberHaus, shirkad Jarmal ah, ayaa bilaabeysa inay guri siiso HomeKit